Haufarire Mwanakomana Wako / Mwanasikana Mukomana / Mwanasikana? Verenga Izvi. - Ukama
Iyo nguva yemashiripiti yasvika: wako anodiwa mwanakomana kana mwanasikana ane mukomana kana musikana.
Ivo vari kupenya nerudo, ivo vane giddy, uye ivo vanoda kushandisa yakawanda nguva nechinhu chechido chavo sezvinobvira.
… Uye unovenga munhu uyu.
Pamwe hauna chokwadi nei, kana pamwe unoziva chaizvo kuti nei usingakwanise kumira navo.
Chero nzira, inogadzirira mamiriro asinganetsi kune wese munhu anobatanidzwa.
Saka, chii chaungaite kana iwe usingade sarudzo yemwana wako yemudiwa?
Ngaticherei zvakadzama kuti tione izvo zvaunogona kusarudza.
Zvakanaka, Nei Kwete?
Chekutanga uye chakakosha, zvakakosha kuti uone kuti chii chausingade nezvavo, uye nei.
Tora iro rako rako uye nyora pasi zvese zvausingade nezvemunhu uyu.
Iva akatendeseka, kunyangwe zvikaoma: unogona kuwana zvakawanda zvisina kugadzikana - uye kunyange zvakashata - nyaya dzemunhu uye kusarura pamusoro pemunhu uyu izvo zvisina chekuita nehukama hwavanadzo nemwana wako.
Iwe unonzwa here kuti ivo neimwe nzira 'vasina kukwana zvakakwana' kumwana wako?
Kana zvirizvo, nei?
Munhu uyu anoita kunge ane pesvedzero yakaipa pahupenyu hwemwana wako here?
Semuenzaniso, mamaki emwana wako ari kutsvedza nekuti ivo vari kushandisa izvo zvaunonzwa kuti 'zvakawandisa' nguva nemumwe wavo?
Pane here hunhu mumunhu uyu zvinongoitika kukutsamwisa?
Iwe unoona here kuti pane tsika / kirasi misiyano yakaoma kunzvera?
Zvakadiniko nemaitiro avo ekupfeka, kana mimhanzi zvavanofarira?
Iyi ingori mishoma yemibvunzo iwe yaunogona kuzvibvunza iwe paunenge uchiita nemoyo wese kutsvaga paiyi nyaya.
Kune mamwe akawanda, hongu, asi ndinovimba izvi zvinogona kuita kuti bhora rikunguruke kuti ugone kusvika pamwoyo wenyaya.
Wakatora Nguva Kuti Uzive Uyu Munhu Here?
Vanhu vanowanzo gadzira zvisaririra nezvevamwe vasati vatora nguva yekuvaziva.
Izvi zvinonyanya kuitika kana zvasvika pakudzivirirwa pamusoro pevamwe.
Isu tinonyanya kudzivirira pamusoro pevana vedu kupfuura chero munhu upi zvake ari panyika, saka zvinonzwisisika kuti nei vatengesi vedu vachikwira kana isu tichifunga kuti chero chinhu chingangoita, chingangove chisina kunaka kana chinokuvadza pavari.
Kune vamwe vanhu, kuziva kuti mwana wavo ari kuita zvehukama nemumwe munhu zvinoita kuti vasagadzikane.
Kunyangwe zvakanzi mwanakomana / mwanasikana anogona kunge ave mumakore ekupedzisira makumi maviri / makore ekutanga / makumi maviri / zvichienda mberi, ivo vanogara vari 'mwana' iyeye pane imwe nhanho.
Kuvaona vachidanana nemumwe wavo kunogona kukonzeresa mhinduro, inotyisa yekudzivirira… kunyangwe ivo vasiri mukuda kwekudzivirirwa.
Mune zvimwe zviitiko, mubereki anogona kunge aine zano rakasimba kwazvo rerudzi rwemudiwa wavanoda kuti mwana wake ave naye.
Kana mudiwa wavo akasarudzwa nemwanasikana / mwanakomana akasanganisa hunhu ihwohwo, vangafunga kuti munhu uyu neimwe nzira haana 'kukwana zvakakwana.'
Kana kuti mwana wavo ari kunetsa kana kuzvidza kungozvitsunya ivo nezvido zvavo.
Kana izvi zvikaitika, zvakakosha kuti uzvibvunze kana uchinyatso kuziva munhu ari kufambidzana nemwana wako.
Usatongere Munhu Nechitarisiko Chavo
Chokwadi, unogona kunge wakambodya pamwe chete, uye ungangodaro wakakurukura zvishoma pakuungana kukuru kwemhuri, asi wakanyatsotora nguva yekuvaziva?
Kutaura kudiki hakunyatsotipa maonero akasimba muhunhu hwemumwe munhu, usambofungisisa mamirioni akasiyana akasiyana ezvevari ivo.
Kana munhu uyu aine hunhu hwakasiyana, uye iwe wakadzidza kwazvo, unogona kuzviwana wagumbuka nekushaya kwavo kugona kutaura nemutauro weChirungu.
Mazwi avo anogona kunge asina kuwanda, uye panogona kuve nemisiyano yetsika yaunowana isinganzwisisike.
Tora nguva yekuvaziva, uye unogona kuzviona zvechokwadi, vanonetseka kutaura Chirungu, asi imhaka yekuti uyu mutauro wavo wechishanu kana wechitanhatu.
Zvinogona kuve zvakaverengerwa mushe-mushe, kufamba-famba, uye kunzwisisa pamisoro isingaverengeke yemisoro, zvese izvo iwe zvaungadai usina kumboziva nezvazvo nekuda kwekutonga kwako kwekukurumidza.
Uyu munhu weboka remari rakasiyana newe here?
Zvakanaka, saka unogona kufungidzira nezvevana vako vachiroora chiremba kana gweta uye ikozvino washungurudzwa nenyaya yekuti ivo 'vagadzikana' nemuvezi.
Unogona kusada munhu uyu chete nekuti iwe unonzwa kuti havasi kuzopa mwana wako mhando yehupenyu yawaifungidzira.
Apa ndipo paunofanirwa kutora chinguva uye uone kuti kangani izwi rekuti 'iwe' rinoshandiswa ipapo.
Uyezve muka kune chokwadi chekuti hukama uhu hauna kana chekuita nazvo iwe .
Maitiro Ekumira Kugonesa Wako Akakura Mwana
Maitiro Ekuita NeMwana Asingaremekedze Akakura: 7 Hapana Matipi eNonsense!
Kufunganya vs. Rudo: Nzira 11 Dzakasiyana
Zvinhu gumi nezvitatu Zvinowanikwa Nevakomana Vasikana Uye Vasikana
Remekedza Mwanakomana Wako / Mwanasikana Sarudzo, Nekuti Ndezvavo
Chimwe chezvidzidzo zvakaoma mubereki achazombodzidza ndechekuti mwana wavo haazi wavo.
Rangarira iyi nhetembo yaKahlil Gibran:
Vana vako havasi vana vako.
Ivo vanakomana nevanasikana veHupenyu kuzvishuwira pachako.
Vanouya kuburikidza newe asi kwete kubva kwauri,
Uye kunyangwe vainewe zvakadaro havazi vako.
Unogona kuvapa rudo rwako asi kwete pfungwa dzako,
Nekuti vane ndangariro dzavo.
Unogona kudzikamisa miviri yavo asi kwete mweya yavo,
Nekuti mweya yavo inogara muimba yemangwana, yausingakwanise kushanyira, kunyangwe muhope dzako.
Iwe unogona kuedza kuva savo, asi usatsvage kusavaita ivo sewe.
Nekuti hupenyu haudzokeri kumashure kana kunonoka nezuro.
Iwe haugone kutarisira kuti vana vako vaite sezvaungaita, kuda sezvaunoda, kurarama sezvauri kurarama.
Ivo vanhu vane nzira dzavo, kutya kwavo, mufaro, uye zvishuwo, uye izvo zvinoda kuremekedzwa nekutsigirwa.
Uye izvo zvinowedzera kune kwavo kudanana zvavanofarira zvakare.
Usaedze Kurambidza Hukama
Chimwe chezvinhu zvakaipisisa zvinogona kuitwa nemubereki kuyedza kurambidza mwanakomana / mwanasikana wavo kufambidzana nemunhu wavasingade.
Rangarira kuti mwana wako anoda munhu uyu nechikonzero (kunyangwe iwe usingatendi ndirwo rudo rwechokwadi), uye chero chakaipa chaunotaura nezvevadiwa vavo chiri kuzomutsa mhinduro yakakomba yemabvi iwe .
Kana uine zviri kunetsa pamusoro peumwe wavo, taura navo nezvezvinokunetsa.
Ita kuti ive hurukuro yakadzikama kwete pane apo manzwiro ako akakwidziridzwa, kana kutonyora pasi zvaunonetseka mutsamba yavanogona kuverenga kakawanda pamusoro kana nguva yacho yakwana.
Rangarirawo kubata mwana wako neruremekedzo, uye taura nemusoro wenyaya uchiitira hanya ivo, pane kungo ratidza kusada kwako.
Nzira yakanaka yekuita izvi ndeyekuvabvunza mibvunzo nezvehukama, pane kupomera.
Semuenzaniso, pane kuti, 'Munhu uyu haakubate zvakanaka,' bvunza: “Unonzwa kuti vanokubata zvakaenzana newe?”
Saizvozvo, pane kuti, 'Handifarire chokwadi chekuti mumwe wako anonwa zvakanyanya,' edza kuita senge: 'Ndakaona kuti maitiro e ___ anochinja zvakanyanya pavanonwa. Izvi zvinoita kuti usanzwa zvakanaka here? ”
Nenzira iyi, pane kumisikidza ako ega maonero uye manzwiro, uri kuvapa iwo mukana wekutarisa pazvinhu zvehukama hwavo.
Mukuvimbika kwese, dzimwe nguva vanogona kunge vatoziva nezvezvinhu izvi vasingazive, uye nekusimudza nyaya idzi nezvinonetsa, unogona kuita kuti mwana wako avatarise padyo padyo, kunyangwe kana vakakushatira izvozvi munguva pfupi.
Tarisira kuramba, kunyangwe kutsamwa, asi ziva kuti mazwi ako anozosvika pane imwe nhanho.
kuziva sei kana musikana achikuda asi achihwanda
Pakupedzisira, Unofanirwa Kudzokera Kure
Mushure mekunge wataura izvo zvawanga uchida kutaura kumwana wako waunoda, inguva yekuti iwe udzokere shure uye varege vabate.
Kugara uchitsoropodza shamwari yemwana wako kunongotsamwisa mwana wako, uye kuvaparadzanisa newe.
Rangarira kuti ivo vakasarudza munhu uyu nezvikonzero zvine zviuru, uye kusagadzikana kusingaperi kubva kwauri kuchango simbisa kutsunga kwavo.
Nhau dzakanaka ndedzekuti kana uhu huri hwevechidiki / hwekutanga makumi maviri hukama, mikana ndeyekuti haizogara kwenguva refu zvakadaro.
Hutano hunopfuura nekukurumidza, uye vazhinji vechidiki vanoyedza hukama hwakati wandei sezvavanodzidza kuona kuti ndivanaani, uye nezvavari kutsvaga.
Isu tese tinodzidza zvakawanda kubva mukukanganisa. Kunyangwe zvingave zvakaoma kuvaona vachitora nhanho, uye zvichitorwadza kuvaona vachiita nekukuvara uye nekusuwa kwemoyo, zvakakosha kuvabvumira iyo nzvimbo yekukanganisa uye kukura kubva pane zvese izvi.
Kungofanana neyekupedzisira katsamba, kana mwanakomana kana mwanasikana wako achishungurudzwa nemumwe wavo, saka ndiyo imwe nyaya.
Kushungurudzwa hakumbogamuchirwi, kungave kwepanyama kana kwekutaura.
Mwanakomana wako kana mwanasikana anogona kusasununguka kutaura newe nezve zviri kuitika, asi vangangove vachida kutaura kushamwari kana chipangamazano.
Kana iwe ukaona mhirizhonga yemumuviri ichitora nzvimbo, kunyanya kana iri mumba mako, une kodzero yekudaidza mapurisa kuti vapindire.
Zvinenge zvisina kugadzikana kune wese munhu, asi zvinogona kurerutsa kukuvara kwakawanda mukufamba kwenguva.
zvekuita pamba kana wabowa
rukova usafeme online mahara
maitiro ekuita kuti mukomana wako awedzere kudanana
maitiro ekuzviita iwe zvishoma kushata
iyo yekutanga mwaka 4 netflix kuburitswa zuva
zvekuita kana wadanana
ko mr mhuka mari inobva kupi